बेला बेलामा पेट दुख्ने रोग,... :: डा. सुबास भट्टराई :: Setopati
डा. सुबास भट्टराई
अल्सर हुँदा दुखाई बढेर आउने, खाली पेट बस्न नसक्ने खायो कि पेट दुखिहाल्ने र कसै कसैलाई बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने समस्या बढ्दै जाँदा दिसा कालो पनि हुनसक्छ। तर, सबैमा ग्यास्ट्रिक र अल्सरका लक्षण यस्तै नहुन पनि सक्छन्।
यसो भनिरहँदा पेटका हरेक समस्या ग्यास्ट्रिक र अल्सरमात्र हुँदैनन्। युवा वर्गमा पेटको एक विशेष रोग वा समस्या बढ्दै गइरहेको छ। जसलाई IBS आइबियस (इरिटेबल बावल सिन्ड्रोम ) भनिन्छ।
IBS आइबियस (इरिटेबल बावल सिन्ड्रोम):
पेटमा केही असहज महसुस भयो कि धेरै मानिस ‘ग्यास्ट्रिक भएको’ भन्दै अस्पताल, क्लिनिकमा आउने गर्छन्। हरेक पेटको रोग ग्यास्ट्रिक वा अल्सर हुँदैनन्।
विशेष गरेर युवा वर्ग, अफिसमा काम गर्ने विद्यार्थी, पढेलेखेको वर्ग, अलि मानसिक तथा शारीरिक थकानमा काम गर्ने व्यक्तिमा यो समस्या देखापर्न थालेको छ।
खानपिनको ख्याल नराख्ने, समयमा खान खाजा नखाने, घर बाहिर बढी खाजा खान खाने विशेष गरी यो पेटको समस्या लिएर आउनुहुन्छ। यसमा पेट फुल्ने, असजिलो र पेट दुख्ने हुन्छ। कोही कब्जियतको समस्या लिएर आउनु हुन्छ। कोही दिनमा ३, ४ पटक दिसा लाग्यो भनेर। दिसा गरेपछि हल्का आराम महसुस हुनेगर्छ।
परीक्षण गर्दा सबै जाँच भिडियो एक्सरे, इन्डोस्कोपी, पेट को ( CT SCAN ) सी.टी स्क्यान, कोलोनोस्कोपीमा केही पनि खराबी देखिन्न।
चिन्ता, टेन्सन, अत्तालिएको बेलामा समस्या बढेर आउँछ। केही काम गर्दा भन्दा नगर्दा यसै बस्दा बढी समस्या भएको भान हुन्छ।
यसलाई आइबीयस (इरिटेबल बावल सिन्ड्रोम) भनिन्छ। यो समस्या थुप्रै मानिसमा देखिने गरेको छ। इरिटेबल बावल सिन्ड्रोम र ग्यास्ट्रिक दुबैमा कति पटक उस्तै लक्षण देखिन्छन् ।
धेरै पटक यी दुईबीच भिन्नता छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। ‘ग्यास्ट्रिक’ भन्दै उपचार हुनेगर्छ। समस्याको सही पहिचान नहुँदा मानिस इरिटेबल बावल सिन्ड्रोममा पनि ग्यास्ट्रिककै औषधि खाइरहेका हुन्छन्।
औषधि खाँदा हल्का निको भएको अनुभव पनि हुन्छ। कति बिरामी त औषधि खाँदा ठीक तर औषधि छोड्न साथ गाह्रो महसुस गर्नुहुन्छ। लामो समयदेखि ग्यास्ट्रिकको औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ र पूर्ण रूपमा समस्या निको भाको छैन वा औषधिमा बानी परेको छ भने ख्याल राख्नुस् हजुरलाई इरिटेबल बावल सिन्ड्रोम पनि हुन सक्छ।
यसको उपचार ग्यास्ट्रिकको भन्दा केही फरक हुन्छ। विशेष गरेर युवा वर्ग, मानसिक तथा शारीरिक थकानमा काम गर्ने व्यक्तिमा यो समस्या देखा पर्न थालेको छ।
खानपिनको ख्याल नराख्ने, समयमा खान खाजा नखाने, घर बाहिर बढी खाजा र खाना खाने ब्यक्तिहरु यो पेटको समस्या लिएर आउनुहुन्छ।
यी पेटका समस्या IBS आइबीयस ( इरिटेबल बावल सिन्ड्रोम) किन बढ्दै छन्?
सह-प्राध्यपाक डा. भट्टराई पोखरा गेस्ट्रो केयर (पेट तथा कलेजो रोग उपचार केन्द्र), पृथ्वी चोकमा कार्यरत डीएम गेस्ट्रो र हेपाटोलोजी विशिष्ट विषेशज्ञ हुन्।
थप जानकारी र परामर्शको लागि फोन: ०६१-५३५ ५६०
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २०, २०७५, २१:१३:००